Nhau - METAL CHINA 2020 MUShanghai
META CHINA 2020 MU SHANGHAI
Kubva Nyamavhuvhu 18 kusvika 20, Iyo 18th China International Foundry Expo yakaitirwa muguta rakanaka reShanghai. Naiye CEO Yuqiang Rwiyo pamwe nekuedza kusingazungunuke kwevane gumi nevaviri vatengesi vekutengesa veFengerda Boka, kurongeka kwakave kubudirira kukuru.
Metal China yakavambwa muna 1987, chiratidziro chave chimwe chenyika chinotungamira hwesheni indasitiri kuratidzira mushure memakore anopfuura makumi matatu ekubudirira. Ndiyo chete nzvimbo yekutsikisa indasitiri inoratidzirwa nesangano renyika indasitiri muChina, uye yakagamuchira mhinduro yakanaka uye rutsigiro rwakasimba kubva kumabhizimusi makuru ekutanga uye kumusoro nekudzika kwevatengesi. Chiratidziro ichi chinofukidza nharaunda yakazara yeanopfuura zviuru mazana mashanu emamirimita, kusanganisira anopfuura 30,000 mativi metres eisiri-ferrous kufa kukanda uye yakakosha kukanda. Vanopfuura 1,300 vanozivikanwa varatidziri vanobva munyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu vachagamuchirwa. Nemhando yepamusoro, yekutanga-kirasi sevhisi uye zvimwe zvakanaka, chiratidziro chinokwezva vanopfuura zviuru zana zvevashanyi vanobva kunyika dzinopfuura makumi masere nematunhu epasirese kuti vatenge nekutaurirana.
Simbi China ndiyo huru indasitiri yekutsikisa indasitiri muChina, uye inoitwa gore rega.Iye inoratidzira inovhara castings, kukanda mafuru, kukanda zvinhu, kukanda michina uye kukanda zvishongedzo, nezvimwewo, uye zvakagadzira kuva yeimwe yehunyanzvi uye ane chiremera brand kuratidzira mu iyo indasitiri ine yakakwira kutaurwa, akakwirira mazinga.
Fengerda akasaina mirairo shanu ipapo, Iropafadzo yakakura kubatana nekambani yesimbi inozivikanwa muIndia. Oue Simbi yakapfurwa, Alloy kukuya kupfura, Stainless pfumo ndiyo yakanaka inotengesa chinhu muchiratidziro.
Fengerda anoomerera pane yakanaka yekutendeseka uye yepamusoro-soro, mukutonga kwakasimba maitiro ese ekugadzira, kunyanya kudzora kwetembirari mukukanganisa nekudzima maitiro, tinobvisa zvigadzirwa zvemhepo zvine hunyanzvi nedzidziso ye "mhepo nesimba", kuvandudza mhando yekugadzira.
Tinotenda kuti zvigadzirwa zvedu zvichazivikanwa neakawanda mutengi.